Ny fiaran-Dàlamby Ambanin’ny Tany : Ain’i Tanànan’i New York · Global Voices teny Malagasy
Ny fiaran-Dàlamby Ambanin'ny Tany : Ain'i Tanànan'i New York
Nandika (en) i Kate R.
Voadika ny 13 Mey 2014 22:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, বাংলা, 日本語, Ελληνικά, Español
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr RomanK Photography. CC BY-NC-ND 2.0.
‘Haingana, miakara, efa tonga izy
Henoy izany làlamby ‘a’ midobodoboka tsy miova izany
Miakara ao amin'ny fiarandalamby “A”
Vetivety foana dia ho tonga any Sugar Hill any Harlem ianao
Ireo no tonon'ilay hira malaza “Take the A Train,” na ” Raiso ny fiarandalamby A” hirain'i Ella Fitzgerald ary noforonin'ilay olo-malazan'ny Jazz Duke Ellington. Io no santionany amin'ireo aingam-panahy marobe izay nateraky ny rafitry ny fitaterana an-dàlamby ambanin'ny tany Big Apple izay mirefy 1.353 kilaometatra ary iray amin'ireo tambajotra lavabe any ambanin'ny tany any Etazonia sy maneran-tany.
Na tiana na tsy tiana dia ambony lavitra noho ireo fitaovam-pitaterana hafa ny fitaterana an-dalamby ambanin'ny tany ao an-anànan'i New York: efa tena fiainana mihitsy izany. Sary natolotry ny Flickr /sakeeb (CC BY 2.0)
Avy amin'ny angano an-drenivohitra toy ny hoe voay anaty fantsona fanariana rano maloto ho amin'ny fitiavana very any an-dranomasin'ireo mpampiasa izany, dia porofoin'ny fitaterana an-dàlamby ambanin'ny tany fa ambony lavitra noho ny fitaovam-pitaterana izy; efa fomba fiaina mihitsy izy.
Anatin'ireo 5 tapitrisa mpampiasa azy andavan'andro ireo mpiasa ao Wall Street, ireo tsy manan-kialofana mitady toerana hatoriana ny alina, ireo mpanakanto an-dalambe manomboka amin'ireo mpandihy hip hop ka hatramin'ireo mpihira ny gadona Meksikana.
Fa tsy any anaty fiarandalamby ihany no ahitana ny harena ara-koltoraly, manodidina ny 200 eo ho eo ireo asa tànana hita mipetraka maharitra eny amin'ny rindrina sy ny tany any amin'ny fiantsonan'ny fiarandàlamby ambanin'ny tany, ny Metropolitan Transportation Authority [MTA] fandaharanasa “Arts for Transit” no manohana azy. Arovan'io fandaharanasa io ihany koa ny mpanakanto mpilalao karazana maro – miainga amin'ny Opera ka hatramin'ny mozika avy any Azia Atsinanana- izay milalao ho an'ireo mpandeha an-tapitrisa misahotaka mihazakazaka amin'ny fifindràna fiarandalamby.
Fa tsy mendri-piderana mandrakariva akory ny rafitry ny fiarandàlamby ambanin'ny tany any New York. Takona o ambanin'ny tanàna ao ireo voalavo an-davitrisa mihaodihaody manodidina ny làlamby. Vao haingana teo izao dia nikarakara fifaninanana antsoina hoe ” Voalavo ratsy indrindra” ny fikambanan'ny sendikan'ny mpitatitra an-drenivohitra. Fifaninanana mitaona ireo mpandeha amin'ny metro handefa sarinà voalavo izay ‘tena maharikoriko’ mety ho hitany eny amin'ny làlana alehany.
Hanaitra ny fahatsapan-tenan'ireo mpiasan'ny MTA marobe momba ny fepetra fiasàny no tanjon'io fifaninanana io. Mifanehatra aminà voalavo ny mpiasa ao amin'ny efitrano fiasàny, ny birao, ny efitrano fihinanana, any ambanin'ny tanydaholo ireo. Na dia natao aza io fifaninanana io tamin'ny 2012 dia sarotra ny mifehy ireo mpitsentsitra izay hita hatrany anaty kalesin-dalamby feno mpandeha mihitsy aza.
Raisin'ireo mpandeha an-tànana koa ny raharaha rehefa tonga ny fotoana fanombanana ny tolotr'asan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany. Tao anatin'ny 15 taona izay dia nanao ” karatra hanaovana tatitra” mifototra amin'ireo zava-miseho ny Mpanentana ny Mpandeha ao an-tanànan'i New York, tafiditra ao anatin'izany ny fahamarinam-potoana, ny fahadiovana, ny fahasimbana ara-mekanika, ny vintana ahazoana seza ary ny fahatetehan'ny filazàna. Tamin'ny karatra farany indrindra izao dia ny fiarandalamby Q no tsara toerana, raha toa ka ny fiarandalamby C no notombanana ho ratsy indrindra.
Ary toy ny mahazatra dia ao amin'ny Twitter no anehoan'ny olona ny heviny momba ny tolotr'asan'ny fiarandalamby :
Ary tara ny fidirako any am-piasana izay mahatnga ahy ho very vola satria mikarama isan'ora aho, nefa aho mbola handoa 112 dolara ho an-dry zareo isam-bolana.#MTA
Tsy noeritreretiko hoe handany ny tontolon'ny Sabotsiko miandry ny fiarandalamby G tany Myrtle-Willoughby aho, nefa heveriko fa manana zavatra hafa ao an-tsainy ny #MTA
#mta. Mbola te-hankasitraka indray ny mta noho ny asa malaza ny vahoakan'i Queens
Fa na dia izany aza dia midera ireo hetsika ara-teknolojia ny hafa :
Manandrana ny teknolojia vaovaon'ny herin'ny masoandro ny#MTA, ary eto #Bronx ny iray voalohany! Henoy ao amin'ny @News12BX pic.twitter.com/qTKbVNsRov ny momba izany.
Na tiana , na tsy tiana, tena ilain'ny mponina an-tapitrisa ao an-tanànan'i New York ny fiarandalamby. Ary misy foana ireo te-hanamafy io fifandraisana io. Ohatra, asehon'ity lahatsary ity ireo olona izay te-hanaitra ireo mpamily fiarandàlamby tsy maintsy mankeny amin'ilay solaitrabe mitsoriadriaka fotsy sy mainty filazana fa nijanona tsy nisy olana teo amin'ny toerana tokony hijanonany ao amin'ny fiantsonana ry zareo.